အသက်ကြီးလာလေလေ သင့်ဘ၀အတွက်ဘယ်အရာက အလိုအပ်ဆုံးလို့ထင်လဲ… – Trend.com.mm
အသက်ကြီးလာလေလေ သင့်ဘ၀အတွက်ဘယ်အရာက အလိုအပ်ဆုံးလို့ထင်လဲ…
Posted on February 9, 2019 February 5, 2019 by Shun Lei Phyo
တစ်နေ့တော့ အားလုံး အိုကြရအုံးမှာပါ။ တစ်နေ့တစ်ခြားအသက်ကြီးကြီးလာတဲ့ လူသားအတိုင်း အတွက် နေ့စဉ် အောင်မြင်မှုတွေ ဂုဏ်ယူမှုတွေ အတွက် လုံးပမ်းနေကြရပါတယ်။ အေးလေ.. ဒီလိုလုံးပမ်းမှလည်း ဘ၀မှာတင့်တယ်မှာကို ….
ကျောင်းသားဘ၀မှာ အရေးကြီးဆုံးက စာတော်ဖို့ ပညာရေးကောင်းဖို့ ဖြစ်သလို၊ ဘွဲ့ရပြီးတော့လည်း အလုပ်ရဖို့ လုံးပမ်းရတယ်။ တစ်ခါ အလုပ်တွေမြဲသွားပြန်တော့လည်း လစာကောင်းဖို့ သူသူငါငါ လုံးပမ်းကြရပြန်တယ်။ တစ်ခါ ဘယ်သူနဲ့ဘယ်လိုယူပြီးဘယ်လိုတင့်တယ်တဲ့ ဥစ္စာပေါ အိမ်ထောင်တစ်ခုကိုတည်ထောင်မလဲ ဆိုတဲ့ Plan တွေချကြပြန်တယ်မဟုတ်ဘူးလား…
ဒီလိုနဲ့အသက်တွေကြီးလာပြန်တော့ သူ့သားသမီးကိုယ့်သမီးရဲ့ ကောင်းကြောင်းသာကြောင်းတွေ အလုအယက်ပြိုင်ရပြန်တယ်။ ဒါကလောကနိယာမဆိုလည်းမမှားပါဘူးလေ…
ဒါပင်မဲ့ လူတိုင်းအတွက် အသက်ကြီးလာလေလေ အလိုအပ်ဆုံးအရာက စစ်မှန်တဲ့ပျော်ရွှင်မှုပါ။ သင့်လက်ရှိ အသက်အရွယ်မှာ သင်ဟာ အားလုံး Perfect မဖြစ်ရင်တောင် စစ်မှန်စွာ စိတ်အေးချမ်းသာပျော်ရွှင်နေရပြီလား။
အသက်တစ်စက္ကန့်ကြီးလာလေလေ သင့်အတွက်အလိုအပ်ဆုံးက စစ်မှန်ခြင်းပင်လျှင်ဖြစ်ပါတယ်။ ပြိုင်ဆိုင်မှုတွေ ဆိုတာ အချိန်တန် အော်တိုပျောက်ကွယ်သွားတဲ့အရာတွေပါ…သင့်ဘ၀ကြီးသာလွန်ကောင်းမွန်မှုကို လက်ရှိဘယ်လောက်ပျော်နေရလဲနဲ့ပဲတိုင်းတာပါ…
တဈနတေ့ော့ အားလုံး အိုကွရအုံးမှာပါ။ တဈနတေ့ဈခွားအသကျကွီးကွီးလာတဲ့ လူသားအတိုငျး အတှကျ နစေ့ဉျ အောငျမွငျမှုတှေ ဂုဏျယူမှုတှေ အတှကျ လုံးပမျးနကွေရပါတယျ။ အေးလေ.. ဒီလိုလုံးပမျးမှလညျး ဘဝမှာတငျ့တယျမှာကို ….
ကြောငျးသားဘဝမှာ အရေးကွီးဆုံးက စာတျောဖို့ ပညာရေးကောငျးဖို့ ဖွဈသလို၊ ဘှဲ့ရပွီးတော့လညျး အလုပျရဖို့ လုံးပမျးရတယျ။ တဈခါ အလုပျတှမွေဲသှားပွနျတော့လညျး လစာကောငျးဖို့ သူသူငါငါ လုံးပမျးကွရပွနျတယျ။ တဈခါ ဘယျသူနဲ့ဘယျလိုယူပွီးဘယျလိုတငျ့တယျတဲ့ ဥစ်စာပေါ အိမျထောငျတဈခုကိုတညျထောငျမလဲ ဆိုတဲ့ Plan တှခေကြွပွနျတယျမဟုတျဘူးလား…
ဒီလိုနဲ့အသကျတှကွေီးလာပွနျတော့ သူ့သားသမီးကိုယျ့သမီးရဲ့ ကောငျးကွောငျးသာကွောငျးတှေ အလုအယကျပွိုငျရပွနျတယျ။ ဒါကလောကနိယာမဆိုလညျးမမှားပါဘူးလေ…
ဒါပငျမဲ့ လူတိုငျးအတှကျ အသကျကွီးလာလလေေ အလိုအပျဆုံးအရာက စဈမှနျတဲ့ပြျောရှငျမှုပါ။ သငျ့လကျရှိ အသကျအရှယျမှာ သငျဟာ အားလုံး Perfect မဖွဈရငျတောငျ စဈမှနျစှာ စိတျအေးခမျြးသာပြျောရှငျနရေပွီလား။
အသကျတဈစက်ကနျ့ကွီးလာလလေေ သငျ့အတှကျအလိုအပျဆုံးက စဈမှနျခွငျးပငျလြှငျဖွဈပါတယျ။ ပွိုငျဆိုငျမှုတှေ ဆိုတာ အခြိနျတနျ အျောတိုပြောကျကှယျသှားတဲ့အရာတှပေါ…သငျ့ဘဝကွီးသာလှနျကောငျးမှနျမှုကို လကျရှိဘယျလောကျပြျောနရေလဲနဲ့ပဲတိုငျးတာပါ…
Feb-14 မှာSingle ဖြစ်နေရင်ဒီလိုကိစ္စမျိုးကို အာရုံနောက်ဖို့မလိုတော့ပါဘူး…:-P